Mitatitra serivisy marobe tsy hita - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Maro ny antony mety tsy nesorina ny serivisy marobe:
Tsy nisy entana napetraka ho fanangonana rehefa notsidihina ny fanananao. Mariho fa tokony hapetrakao foana ny entanao ny hariva mialoha satria mety hanomboka aloha ny serivisy. Na dia tsy esorina aza ny ankamaroan'ny fanangonana raha tsy amin'ny 7:00 maraina, ny sasany dia azo atao aloha kokoa mba tsy hisian'ny fitohanan'ny lalana amin'ny ora be indrindra.
Ny fiara na ny sakana hafa dia nanakana ny mpamily anay tsy haka ireo fitaovana
Tsy voarakitra izany. Tsy maintsy voafandrika mialoha ny serivisy rehetra amoron-dalana. Ataovy azo antoka fa raketinao ny laharan'ny famandrihana nomena rehefa manao famandrihana
Tsy hitanay ny adiresinao. Tsy ny trano rehetra no mora hita amin'ny adiresin'ny arabe fotsiny. Raha tafiditra ao anatin'ity sokajy ity ny fanananao dia omeo antsipiriany momba ny toerana misy anao mandritra ny famandrihanao mba hanampiana ny mpamily anay hahita ny fanananao
Naseho tamin'ny fomba nanasarotra ny fanesorana ireo entana ireo. Avereno jerena azafady ny torolalana ao amin'ny pejin'ny Famoriam-bola Bulk Kerbside raha mila fanazavana momba ny fomba tokony hanehoana ny fanangonanao amin'ny sisin-dalana
Tao amin'ny fananan'olon-tsotra no nisy ny entanao fa tsy teo amoron-dalana. Tsy hiditra ao amin'ny tranonao ny mpamily anay haka ny fako
Mety ho be dia be ny fako fanampiny natolotra tamin'ny fanangonana, satria maro ny mponina no manao ambanin-javatra ny fako hatolony rehefa mamandrika. Izany dia mety hahatonga ny fanangonana sasany ho vita ny ampitso
Mety tsy hitanay ny fanangonanao
Raha te hitatitra serivisy tsy hita, mifandraisa amin'ny Foiben'ny serivisy mpanjifa amin'ny 1300 1COAST (1300 126 278).